Cumar C/rashiid oo ku sugan Kismaayo iyo kulamo uu la leeyahay Xubnaha labada Aqal ee Jubbaland si uu taageero uga helyo Xildhibaanada Jubaland iyo Putland oo is garabsanaaya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Cumar C/rashiid oo ku sugan Kismaayo iyo kulamo uu la leeyahay Xubnaha labada Aqal ee Jubbaland si uu taageero uga helyo Xildhibaanada Jubaland iyo Putland oo is garabsanaaya!!
Cumar C/rashiid oo ku sugan Kismaayo iyo kulamo uu la leeyahay Xubnaha labada Aqal ee Jubbaland si uu taageero uga helyo Xildhibaanada Jubaland iyo Putland oo is garabsanaaya!!
Dec 02, 2016WARAR
Ra’iisul Wasaaraha xilka haya Cumar C/rashiid ahna Musharax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa ku sugan magaalada Kismaayo, halkaasoo uu kulan uu kula leeyahay Madaxda Jubbaland iyo xubnaha labada Aqal ee ka soo jeeda Jubbaland.
Kulankan ayaa ka socda mid ka mid ah Hotelada Kismaayo, waxaana ku sugan 51 xubnood ee ka tirsan Labada Aqal ee Jubbaland.
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid ayaa weydiistay xubnaha labada aqal ee Jubbooyinka inay taageeraan qorshihiisa siyaasadeed iyo Musharaxnimadiisa, isla markaana ay ka qeyb qaataan is bedelka la doonayo inuu ka dhaco dalka.
Cumar C/rashiid ayaa ka mid ah Musharaxiinta ugu xooggan ee ololaha weyn ugu jira sidii xilka madaxweynaha ugu guuleysan lahaayeen, waxaana dhowrkii todobaad ee u dambeeyay uu tagayay xarumaha maamul goboleedyada, sida Baydhabo, Kismaayo iyo Garowe.
Waxaa uu taageerada ugu badan ka raadinayaa Xildhibaanada ka soo jeeda Puntland iyo Jubbaland oo uu doonayo in codkooda ku xisaabtamo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa taageersan Cumar C/rashiid, isagoo mar uu todobaadkii hore uu la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee Jubbaland u jeediyay inay taageeraan.
Jubbaland ayaa dhowaan soo dhameystirtay xubnaha Aqalka Hoose ee 43 Xildhibaan, iyadoo horay Baarlamaanka Jubbaland u doortay 8 xubnood oo aqalka sare ah.
Imaaraadka Carabta ayaa la rumeysan yahay inuu Cumar C/rashiid u yahay xulashada koowaad, iyadoo balan qaadyo u fidisay Maamul goboleedyada qaar sidii ay u taageeri lahaayeen boob.
Previous PostMuuqaal: C.raxmaan Cirro oo Sharafta Looga qaaday Hargeisa oo ka Waramay ciidan Qoryo ku qabtay iyo wixii dhacay DAAWO!! Next PostMadaxweyne dal Afrikaan ah soo hogaaminayey Mudo ku dhowaad 25 sano oo doorasho looga adkaaday Daawo Sawirro!!